Fiber optic nalalka fiber optic cable pool rakibo Gogosha - Shiinaha KepuAi Photoelectric
Fiber optic nalalka fiber optic cable pool Gogosha rakibaadda
Dhexroor Fiber: 0.75mm * 7 qaybood & 1.2mm * 14 qaybood & 1.5mm * 1 strands
Engine Light: DMX 1002 / DMX 502 / DMX 1001 & 75w engine light
End habboon: Optional
cable An fiber indhaha waa cable ka kooban hal ama in ka badan fiiloyin indhaha loo isticmaalo oo ay iftiinka ugu gudbiyaan. Canaasiirta fiber indhaha caadi ahaan si gaar ah dahaarka leh kula layers caag ah oo ku jira tube difaac ku haboon deegaanka meesha cable la gayn doono.
Guud ahaan, waxaan soo jeedinaynaa in la isticmaalayo 1.5mm * 1 cable, 0.75mm * 3 cable iyo 1.2 * 14 cable for yar, dhexdhexaad iyo dhibco weyn, oo lagu daray 75w / 45w / DMX1002 engine iftiinka.
Haddii aad rabto in aad ku qurxin ku laayeen balliga, waxaan soo jeedinaynaa in la isticmaalayo fiiloyin siyasad kooxda 10mm iyo DMX 1002 engine iftiinka.
Fadlan noo soo dir baaritaan la sawiro iyo shuruudaha, ka dibna waxaan kuu soo diri doonaa quotatio a
Previous: Fiber optic dheertahey iftiin la surto oo makhaayad, hotel iftiin la surto, ololeeya iftiin la surto
Next: Fiber Optic Laydhka for Garden, Park fiber indhaha iftiiminta
saqafka baabuur iftiin
fiber optic darafyadiisa
pool nalalka fiber optic
fiber optic xiddiga light
xiddigaha fiber optic
sahayda fiber optic
fiberstars biiriyaan nalalka
dibadda cable fiber optic
pool iftiin fiber optic